New iPhone 7 Fandefasana batterie ho an'ny fakantsarin'ny iPhone China Manufacturer
Description:Iphone Battery Extender,Iphone Battery Service,Iphone Battery dia tsy mihazona fiampangana
Home > Products > Batterie IPhone > IPhone 7 Battery > New iPhone 7 Fandefasana batterie ho an&#39;ny fakantsarin&#39;ny iPhone
Customized 1960 mAh iphone 7 batterie fanoloana . Maka ny cellule TI izy io ary mamerina sela vaovao amin'ny vatan'ny kobalt, raha mbola 500 ny faran'ny herinandro dia mbola 80% farafaharatsiny. Izahay koa dia manome baoritra manana kapila iphone 2200 mAh ho an'ity modely ity. Ny batterie iphone manana CE, ROHS ary FCC certifications, miaraka amin'ny 1 taona garanteza ary tompon'andraikitra amin'ny serivisy taorian'ny varotra.
Hequanqingnuo dia manana rafitra fitantanana tanteraka sy siantifika ary mifantoka amin'ny fahamendrehana, miantoka amin'ny fifanarahana, miantoka ny kalitaon'ny vokatra, ary manaiky ny tetik'asa ara-barotra momba ny karazam-pitantanana mufti isan-karazany sy ny tombom-barotra kely amin'ny fivarotana avo.Products dia nandalo RoHS / CE / FCC Certificate, teknôlôjia tsy misy fepetra, azo averina indray. Manantitrantitra ny fitsipiky ny 'Quality Voalohany, ny fitoviana ary ny tombontsoa iraisana, ny fampandrosoana iombonana ary ny fanompoana ny tsara'.
Iphone Battery Extender Iphone Battery Service Iphone Battery dia tsy mihazona fiampangana Iphone 5 Battery Extended Iphone 6 Battery Life Extended Iphone SE Battery External Iphone Battery Dead Iphone Battery Power